Ogaden News Agency (ONA) – Katalonya (Catalonia) oo diiday inay ka tanaasulaan Aftida Aaya-Ka-Tashigooda
Katalonya (Catalonia) oo diiday inay ka tanaasulaan Aftida Aaya-Ka-Tashigooda
Posted by ONA Admin	/ April 24, 2014
Wuxuu khilaaf xoogan soo kala dhex galay barlamaanka gobolka Catalonia oo u codeeyay in shacabka dalkaasi afti laga qaado iyo baralmaanka dalka Spain oo diiday arintaa.
Shacabka Catalonia oo dhalinayarada ay aad ugu bartameen kooxda wadata magaca caasimadooda ee Barcelona ayaa halgan adag ugu jira siday uga madax banaanaan lahaayeen dalka Spain oo lagu daray taariikhda markay ahayd 11kii September 1714, markii la saxiixay Heshiiska lamagac baxay Utrecht Treaty oo boqoradii Yurub ee dalalka iyo boqornimada isku haystay ay kala saxiixdeen. Waqtigaa ayaa dalka Catalonia la siiyay boqorkii Spain ka talinayay oo muddo yar ka dibba soo saaray wareegtada Nueva Planta. Wareegtadan ayaa mamnuucday waxkasta oo gooni u ahaa dadka reer Catalonia, hadday ahayd xuduudaha iyo hadday ahayd xagga canshuuraha. Waa taariikh dheer.
Hadaba M/weynaha Gobolka Catalonia Arthur Mas ayaa ka codsaday Xukuumadda Dhexe ee Spain in aanay carqaladaynin aftida Aaya-Katashiga madaxbanaanida Gobolka oo dhici doona 9ka Bisha November inkastoo uu baarlamaanka Federaalka uu diiday talaabadan ay ku tilmaameen goosadka.
M/weyne Mas ayaa mar uu la hadlayay Saxaafadda ajnabiga ee jooga Barcelona ku adkaystay in Aftida ay dhici doonto waqtigii loo qabtay ee 9ka November. Wuxuu intaa raaciyay; “Ma ogsooni inay dawladda dhexe ku tala jirto inay is-hortaagto doorashada aftida.”
Maalinta ay u dabaadagaan shacabka Catalonia nin wali agtooda ka ah oo la yidhaahdo Joorj (George Patron saint of Catalonia), maalintaa oo Todobada Milyan ee reer Catalonia ay xusaan ayuu M/weynaha gobolka Arthur Mas xasuusiyay R/wasaaraha Spain Mariano Rakhoy inuusan dib uga waabanaynin diyaarinta Aftida shacabka Catalonia. Wuxuuna yidhi; ” wadahadalka mar walba wuu inoo furan yahay hasa ahaatee marnaba joojin mayno diyaargarowga. Hadaan joojino iyadoo aanay jirin badal kale oo qanciya shacabka waxay keeneysaa cadho balaadhan”.
Waxaa aad usii mugiyay wadahadalka u socday Gobolka Catalonia iyo dawladda dhexe Diidmada baarlamaanka Spain uu ku horjoogsaday arintaa, taasoo ka cadhaysiisay shacabka Catalonia oo iyagana baarlamaankooda uga codeeyaya in aan marnaba laga noqonaynin Aftida Aaya-katashiga shacabka.
Gobolka Catalonia oo ah gobola qani ah oo warshada badan leh, isla markaana isku xidha dalal badan oo Yurub ah ayaa waxaa ku nool shacab ka duwan dhaqan ahaan iyo afba shacabka Spanish-ka, waxaana soo dhex maray dagaalo badan oo taariikhi ah.
Arimaha ay sida aadka ah isha ugu hayaan shacabka Catalonia waa aftida ka dhici doonta gobolka Scotland oo ka tirsanaa Ingriiska oo doonaya in shacabkooda laga qaado Afti 18ka September 2014.
Guud ahaan, aftida shucuubta ayaa ah qodob caalami ah oo dhamaan dawladaha saxiixay cahdiga Qaramada Midoobay (UN Charter) ay ogolaadeen. http://www.unpo.org/article/4957 ..
Waxaa xusid mudan inuu Hogaanka Arimaha Dibadda ee JWXO mudane C/raxman Madey kala qaybgalay shacabka Basque damaashaadkii asaaskii xisbiga ay ku midoobayeen ururada u dhaq-dhaqaaqa Aaya-Ka-tashiga shacabka Catalonia ee loo bixiyay SORTU ( http://www.ogadennet.com/?p=20565 )
Waxay ka mid tahay Afti-Kaqaadida shucuubta waxyaabaha soo afjara dagaalada iyo isnacaybka shucuubta dhexdooda ah, taasoo ku dhamaata inay ama kuwad noolaadan si nabad galya ah ama noqdaan laba daloo xor oo kuwada nool gobolka oy ka dhexeysa Iskaashi.